Indlu encinci kude neKhaya
Nandipha ukuba wedwa kwindlwana yelizwe. Uya kulala kwizandi zamasele, kwaye uvuke kwiintaka eziculayo, kwaye uyonwabele ezinye izilwanyana zasendle. Indawo ezolileyo kakhulu apho unokuthi wedwa okanye ukonwabele idolophu yendawo. Ungayiodola ifoto ye-intanethi ye-curbside, ukuhanjiswa okanye uku-odola kwi-intanethi, kunye nokuqhubela phambili kwizitendi zekofu. Iimoto ezintle zemihla ngemihla ukuya eMount Rainer, Mount St. Helens, Northwest Trek, Wolf Haven,
Indawo ezolileyo, yelizwe esekufutshane nedolophu yalapha, kunye nengekho kude kakhulu ukusuka eTacoma, eOlympia naseSeattle. Kwabo basebenza bekude iimvavanyo zesantya se-WiFi ziyi-119.34 ekhitshini, 119.67 kwigumbi lokuhlala, 119.05 kwigumbi lokulala kunye ne-87.14 kwigumbi lokuhlambela. KungeComcast
Ngelixa kwindawo, ungajonga i-Deschutes Falls, i-Northwest Trek, i-Tenino quarry, i-Great Wolf Lodge, i-Wolf Haven, i-Mount Rainer, i-Mt. St. umgama. Kukho iivenkile ezininzi zakudala eTenino. I-Yelm inebhanyabhanya enkulu yethiyetha, iipaki ezininzi zikawonke-wonke, iindawo ezininzi zekofu, ukutya okukhawulezayo, iSafeway, iWalmart kunye nomzila omkhulu wokuhamba / wokukhwela.
Uya kuba nemfihlo yakho kodwa ndiyafumaneka kuyo nayiphi na imiba okanye imibuzo